28 Zvino patakanga tapukunyuka, takabva taziva kuti chitsuwa chacho chainzi Marita.+ 2 Vanhu vaitaura mutauro usiri wedu vakatiitira mutsa unoshamisa,+ nokuti vakabatidza moto, vakatigamuchira tose vachitibatsira nokuda kwemvura yainaya uye nokuda kwechando.+ 3 Asi Pauro paakaunganidza rimwe svinga retsotso akariisa pamoto, nyoka yakabuda nokuda kwokupisa, ikaruma uye ikaramba yakanamatira paruoko rwake. 4 Vanhu vaitaura mutauro usiri wedu pavakaona chisikwa ichi chine uturu chakarembera paruoko rwake, vakatanga kutaurirana vachiti: “Chokwadi murume uyu imhondi, kunyange zvazvo apukunyuka mugungwa, kururamisira kwokuranga hakuna kumubvumira kuti arambe achirarama.” 5 Zvisinei, akazunzira chisikwa chacho chine uturu mumoto, akasakuvara.+ 6 Asi vaitarisira kuti aizozvimba kana kuti aizongoerekana awira pasi ofa. Pashure pokunge vamira kwenguva refu, vakasaona chinhu chinokuvadza chichiitika kwaari, vakachinja pfungwa dzavo, vakatanga kuti aiva mwari.+ 7 Zvino pedyo nenzvimbo iyoyo murume mukuru wechitsuwa ichocho, ainzi Pabriyo, aiva neminda; uye akatigamuchira nomutsa, akagara nesu zvakanaka kwemazuva matatu. 8 Asi baba vaPabriyo vakanga varere vachitambudzika nefivha nemanyoka, uye Pauro akapinda mavaiva, akanyengetera, akaisa maoko+ ake pavari, akavaporesa.+ 9 Pashure pokunge izvi zvaitika, vanhu vose vakanga vaine zvirwere pachitsuwa ichi vakatangawo kuuya kwaari, vachirapwa.+ 10 Vakatikudzawo nezvipo zvizhinji uye, patakanga tava kuenda nechikepe, vakatirongedzera zvinhu zvataizoda. 11 Kwapera mwedzi mitatu takafamba nechikepe chaibva Arekizandriya+ chakanga chapedzera mwaka wechando pachitsuwa ichocho chaiva nomufananidzo waiti “Vanakomana vaZeusi.” 12 Takasvika pachiteshi chengarava cheSirakusi tikagara ipapo kwemazuva matatu, 13 inova ndiyo nzvimbo yatakazobva pairi tikatenderera, tikasvika kuRegiyumu. Kwapera zuva rimwe chete mhepo yokumaodzanyemba yakamuka, tikazosvika kuPuteori pazuva rechipiri. 14 Pano takawana hama uye dzakatiteterera kuti tigare nadzo kwemazuva manomwe; uye saizvozvi takananga kuRoma. 15 Hama dzaiva ikoko, padzakanzwa mashoko aiva nechokuita nesu, dzakauya kuzosangana nesu tichiri kuMusika weApiyo neHotera Nhatu uye, Pauro paakadziona, akaonga Mwari, akashinga.+ 16 Pakupedzisira, patakanga tapinda muRoma, Pauro akabvumirwa+ kugara oga aine murwi aimurinda. 17 Zvisinei, kwapera mazuva matatu akaunganidza vaya vaiva varume vakuru vevaJudha. Pavakanga vaungana, akati kwavari: “Varume, hama, kunyange ndakanga ndisina kuita chinhu chinopesana nevanhu kana tsika dzemadzitateguru edu,+ ndakaiswa mumaoko evaRoma somusungwa+ anobva kuJerusarema. 18 Ava, pashure pokunge vandibvunzurudza,+ vakanga vachida kundisunungura,+ zvapakanga pasina chikonzero chokuti ndiurayiwe.+ 19 Asi vaJudha pavakaramba vachipesana nazvo, ndakagombedzerwa kukwidza mhosva+ yacho kuna Kesari, asi kwete sokunge kuti ndaiva nechimwe chinhu chokupomera rudzi rwangu. 20 Chokwadi nokuda kweizvi ndakateterera kuti ndikuonei uye nditaure nemi, nokuti ndakasungwa necheni+ idzi nokuda kwetariro+ yaIsraeri.” 21 Ivo vakati kwaari: “Hatina kugamuchira tsamba dzakabva kuJudhiya dzine chokuita newe, uyewo hapana kana mumwe wehama asvika atiudza kana kuti ataura chinhu chakaipa pamusoro pako. 22 Asi tinofunga kuti zvakakodzera kuti tinzwe kwauri zvaunofunga, nokuti chokwadi pamusoro pekapoka+ aka tinozviziva kuti kanoshorwa kwose kwose.”+ 23 Zvino vakarangana zuva naye, uye vakauya kwaari vari vazhinji kwazvo munzvimbo yaaigara. Iye akavatsanangurira nyaya yacho nokuvapupurira kwazvo pamusoro poumambo hwaMwari+ uye achivanyengetedza pamusoro paJesu kubva mumutemo waMosesi+ neZvakanyorwa nevaprofita,+ kubvira mangwanani kusvikira manheru. 24 Vamwe vakatanga kutenda+ zvinhu zvakataurwa; vamwe vakanga vasingatendi.+ 25 Naizvozvo, nokuti vakanga vasingabvumirani, vakatanga kuenda, Pauro paaitaura shoko iri rimwe chete, achiti: “Mudzimu mutsvene wakataura zvakakodzera kumadzitateguru enyu uchishandisa muprofita Isaya, 26 uchiti, ‘Enda kuvanhu ava uti: “Kunzwa, muchanzwa asi hamuzombonzwisisi; uye, kutarira, muchatarira asi hamuzombooni.+ 27 Nokuti mwoyo yevanhu ava yava mikukutu, uye vakanzwa nenzeve dzavo pasina chavanoita, uye vakatsinzina maziso avo; kuti varege kuzomboona nemaziso avo uye kunzwa nenzeve dzavo uye kunzwisisa nemwoyo yavo vatendeuke, kuti ndivaporese.”’+ 28 Naizvozvo zivai kuti nzira iyi, iyo Mwari anoponesa nayo, yakatumirwa kune mamwe marudzi;+ chokwadi iwo achaiteerera.”+ 29 —— 30 Naizvozvo akagara kwemakore maviri ose ari muimba yake oga yaibhadharwa,+ uye vose vaiuya kwaari aivagamuchira nomutsa, 31 achivaparidzira umambo hwaMwari uye achivadzidzisa zvinhu zvine chokuita naShe Jesu Kristu norusununguko rukuru rwokutaura,+ asingadziviswi.